Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Thalassaemia trait (သာလာဆီးမီးယား) မွေးရာပါ သွေးရောဂါ
Tue, Dec 18, 2012 at 12:16 PM
ကျွန်မကကိုယ်ဝန်လွယ်ထားတာ ၄ လရှိပါပြီ။ (့) မှာအလုပ်နေတဲ့အတွက် ဒီကဆေးရုံမှာပဲ ပြထားပါတယ်။ အရင်အပတ်က ဆီး၊ သွေးစစ်ထားပါတယ်။ အခု result ကိုအတူပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ အသက်က ၃၃ နှစ်ပါ။ အဲဒီထဲက thalassaemia trait ဆိုတာဘာကိုပြောတာလည်း။ အရေးကြီးပါသလား။ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါသလား။ နားမလည်လို့ပါဆရာ။
So sorry I was unable to communicate with you earlier. I want to inform you that the screening tests for the baby indicatealow risk of Down Syndrome or the other chromosomal abnormalities we screened for. The risk of your baby having Down syndrome is 1 in 9334. So this isagood result.
However, you haveatype of thalassaemia trait which can possibly be transmitted to your baby. Yours is the HbE thalassaemia trait which is fairly common among people from South East Asia. You areacarrier but you don't have thalassaemia, which isacondition in whichaperson's blood level is constantly low due to the breakdown of red blood cells. To determine the risk of your baby having thalassaemia, I would advise your husband to haveasimple blood test for thalassaemia screening, if he has not already done this.
If you agree to this, he can come down at any time before the next appointment to have his blood drawn for this test. I would need his ID number to get him registered for the blood test.
Please feel free to ask questions on this issue if you have any. Looking forward to seeing you again.
Thalassaemia (သာလာဆီးမီးယား) ဆိုတာ မွေးရာပါ သွေးရောဂါအုပ်စုတခုဖြစ်တယ်။ အဖြစ်မနည်းလှပါ။ ရောဂါမျိုးရိုးက မိဘတွေဆီကနေ ရလာတာဖြစ်တယ်။ ကလေးရဲ့ သွေးနီဥတွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပျက်စီးထာခံစားရလို့ Haemolytic anaemias သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်လာနိုင်တယ်။ မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၊ အာရှတိုက်တွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ Mediterranean Anaemia, Cooley's Anaemia, or Homozygous Beta Thalassaemia ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့လဲ ခေါ်သေးတယ်။ ကမ္ဘာမှာ နှစ်တိုင်း ကလေးပေါင်း တသိန်း ဒီရောဂါအခံနဲ့ မွေးလာနေတယ်။
နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်။ Thalassaemia minor အသေးစား နဲ့ Thalassaemia major အကြီးစား။ Thalassaemia trait ဆိုတာ အသေးစားဖြစ်တယ်။ ဒီကလေးတွေက ပုံမှန်လိုဘဲနေမယ်။ တခါတလေမှသာ သွေးအားနည်းတာ ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က နေကောင်းနေလို့ Healthy carriers ရောဂါသယ်ပို့နေသူလို့ တင်စားခေါ်တယ်။ သူကနေ မွေးလာမဲ့ကလေးတွေမှာ လာဖြစ်မယ်။ မွေးလာတဲ့ကလေးကြ သူလိုကလေးရော၊ Thalassaemia major အကြီးစားရောဖြစ်မယ်။
Thalassaemia major အကြီးစားက ဆိုးတယ်။ ကလေးငယ်တုံးမှာ ရောဂါခံစားရမယ်။ ကလေးမှာ Haemoglobin (ဟီမိုဂလိုဘင်) ဆိုတဲ့ သွေးနီဥထဲက အောက်စီဂျင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဓါတ် အလုံအလောက်မရှိဘူး။ ကလေးဟာ ဖြူဖတ်ဖြူရော်နေမယ်။ အားယုတ်မယ်။ အသက်ရှူမဝဖြစ်မယ်။ နှလုံးခုန်မြန်နေမယ်။
မွေးရာပါလာမှတော့ ပျောက်သွားအောင်လုပ်မရပါ။ တသက်လုံးဆေးကုနေရတော့မယ်။ မကြာမခဏ Regular blood transfusions သွေးသွင်းနေရမယ်။ သွေးသွင်းရဖန်များရင် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမှာတွေလဲရှိတယ်။ Diabetes ဆီးချိုရောဂါ၊ Heart failure နှလုံးရောဂါ နဲ့ Liver disease အသဲရောဂါ။ ဒီလို သံဓါတ်များနေတာအတွက် Desferrioxamine (Desferal) ဆေးနဲ့ကုသရတယ်။
Bone marrow transplants ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးတာလဲ လုပ်နိုင်တယ်။ တူတာရှာရခက်တယ်။ မွေးချင်းတဲက ရတာများတယ်။ ၃ ယောက် ၁ ယောက်သာတူတတ်တယ်။
အိမ်ထောင်ဖက်ကလဲ Thalassaemia trait ဖြစ်နေရင် မြေးတွေမှာ Thalassaemia major လာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန် တခါဆောင်တိုင်းမှာ ၂၅% လူကောင်း၊ ၅ဝ% Thalassaemia trait နဲ့ ၂၅% မှာ Thalassaemia major ဖြစ်နိုင်တယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 1:44 PM